जीवावशेषको आयु कसरी पत्ता लगाइन्छ ? ~ विज्ञान संसार
Posted by Om Bhandari On 5:45 PM
तपाइ हामीलाई थाहा छ कि विरूवाहरूको लागि पातमा खाना बनाउन नभइनहुने ग्याँस कार्बनडाइअक्साइड हो । कार्बनडाइअक्साइड भन्नाले कार्बन र अक्सिजन तत्वको रासायनिक संयोजनबाट बन्ने वस्तु हो । त्यसैले वनस्पतिको प्रत्यक कोषमा कार्बन तत्वको कण विद्यमान रहेको हुन्छ । प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष ढंगले जनावरले बनस्पतिहरूको भोजन गर्ने भएकोले जनावरको प्रत्यक कोषमा पनि कार्बन कण रहेको हुन्छ । अर्थात कुनै पनि जीवभित्र वायुमण्डलमा रहेको कार्बन कण भोजनबाट संकलित भएको हुन्छ । जीवमा कार्बन कण संकलित हुने प्रक्रिया जन्म देखि शुरू हुन्छ भने मृत्यु पछि यो बन्द हुन्छ ।
अर्को कुरा, कार्बन परमाणु दुई प्रकारका छन : साधारण कार्बन र रेडियो कार्बन । रेडियो कार्बन भन्नाले रेडियो विकिरण निकाल्ने कार्बन तत्व बुझिन्छ । रेडियो कार्वन साधारण कार्बनको आइसोटप (Isotope) हो । आइसोटप भन्नाले एउटै तत्वको फरक न्यूट्रोन संख्या भएको परमाणु भन्ने बुझिन्छ । जस्तो कि साधारण कार्बनको परमाणुको नाभिक (Nucleus) मा ६ वटा मात्र न्यूट्रोनहरू हुन्छन । यसको आइसोटप ( रेडियो कार्बन)मा ८ वटा न्यूट्रोनहरू रहेका हुन्छन । त्यसैले साधारण कार्बन परमाणुको भार (प्रोटोन र न्यूट्रोनको जोड) १२ रहेको छ भने रेडियो कार्बनको भार १४ (प्रोटोन ६ + न्यूट्रोन ८) रहेको छ । साधारण कर्बनलाई C12 लेखिन्छ भने रेडियो कार्बनलाई C14 लेखिन्छ ।
वायुमण्डलमा साधारण कार्बन र अक्सिजन मिलेर कार्वनडाइअक्साइड बने जस्तै रेडियो कार्बन र अक्सिजन मिलेर रेडियो सक्रिय कार्वनडाइअक्साइड बनेको हुन्छ । विरूवाले प्रकाश संश्लेषण क्रिया गर्दा वायुमण्डलबाट साधारण कार्वनडाइअक्साइडका साथसाथै रेडियो सक्रिय कार्वनडाइअक्साइड पनि प्राप्त गरेको हुन्छ ।
रेडियो कार्वन परमाणु त्यस्तो परमाणु हो, जसले लगातार रेडियो विकिरण छर्नुका साथै समयको गतिसंग त्यो स्वयं पनि नष्ट वा विघटन हुदैँ गइरहेको हुन्छ । जीवित वस्तुमा रेडियो कार्वन जम्मा हुने र त्यो विघटन हुने प्रक्रिया एकैसाथ भइरहेको हुन्छ । तर जब जीवित वस्तुको मृत्यु हुन्छ, तब त्यसमा रेडियो कार्वनको विघटन मात्र हुन्छ ।
रेडियो कार्वनको आधी मात्रा विघटन हुन जम्मा ५७०० वर्ष लाग्छ । यसलाई रेडियो कार्वनको अर्धायु भनिन्छ । फेरि बाँकी रहेको रेडियो कार्वनको आधी मात्रा सकिन अको अर्धायु (५७०० वर्ष) लाग्छ । फेरि त्यसको पनि आधा विघटन हुन अर्को अधायु लाग्छ । अर्थात सुरूको ५०% विघटन हुन ५७०० वर्ष, ७५% सकिन २*५७०० वर्ष, ८७.५% सकिन ३*५७०० वर्ष लाग्छ ।
रेडियो कार्वनको विघटन हुने यो खास प्रक्रियाको आधारमा नै वैज्ञानिकहरूले जीवावशेषहरुको आयुको अनुमान गर्छन । जस्तो कुनै जीवावशेषमा रेडियो कार्वनको आधा मात्र विघटन भए त्यो ५७०० वर्ष पुरानो हुन्छ । त्यस्तै ७५ प्रतिशत रेडियो कार्वनको विघटन भए त्यो जीवावशेषको आयु ११४००(२*५७००) वर्ष पुरानो हो भनेर भन्न सकिने भयो ।
रेडियो कार्वन परमाणुको विघटनको स्थिति हेरी जीवावशेषको आयु पत्ता लगाउने यो प्रविधिको आविस्कार अमेरिकाको शिकागो विश्वविद्यालयका वैज्ञानिक डा. विलियम बिलार्ड फ्रब लिब्बीले सन १९४० मा गरेका थिए ।
Categories: कार्बन, जीवावशेष, जैबिक, पदार्थ